Entertainment Archives - TheeSayChin
The Fast & The Furious9Fast & Furious ဇာတ်ကားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံပရိသတ်တွေသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေပါ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါ။ Fast & Furious 1 ဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အခုမကြာခင် အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Fast & Furios9ကတော့ ၂၀၂၀ ဧပြီလထဲမှာ ထွက်ရှိလာတော့မှပဲာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ WWE နပန်းချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ John Cena ကြီးကို လူဆိုးအဖြစ်နဲ့တွေ့မြင်ရတော့မှာပါတဲ့။ [embedded content] Lad Bible သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Van Disel တစ်ယောက်ကတော့ Fast & Furious9မှာ John Cena နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာ […]
Image:imdb Liu Yifei ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မင်းသမီးချော လေးပါ။တရုတ်ရဲ့ နတ်မိမယ်လေးပါ။ချော မော လှလွန်းတဲ့ မင်းသမီး လေးမို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုကို အပြည့်အ၀ ရထားသူပါ။အ ချောလေး Liu Yifei ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ လုံး၀ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ (1)Mulan(2020) [embedded content] ‘Mulan(2020) ကတော့ ကြည့်မယ်ဆိုပြီး အားလုံးက ဝိုင်းပြီး အားခဲ ထားကြတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ဒီဇာတ်ကား က Liu Yifei ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းမှာ နောက်ထပ် စိုက်ထူမယ့် မှတ်တိုင်သစ် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ အားလုံးက မျှော်လင့် ထားကြတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။Liu Yifei ? Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, ၊Jet […]
ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖို စီးရီးအသစ် October Faction
Netflix.com Netflix က October Faction အမည်ရှိတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို အမျိုးအစားရုပ်သံစီးရီးသစ်တစ်ခုကို ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ ရုပ်သံစီးရီးဟာ ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်မှ စလွှင့်ခဲ့ပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်း လူစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Netflix ဟာ Sex Education နဲ့ Brooklyn Nine-Nine စီးရီးတို့အတွက် ကြေငြာအားကောင်းကောင်းနဲ့ လှုံဆော်နေပေမယ့် အခု October Faction နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြေငြာတာတို့ ဘာတို့ လုပ်တာ မတွေ့ရပါဘူး။ ကြော်ငြာတွေထဲမှာ မပါပေမယ့်လည်း October Factionဟာ တစ်ခဏအတွင်း လူစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ Netflix.com October Factionဟာ comic စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ supernatural horror အမျိုးအစား စီးရီးတစ်ခုပါ။ Comic Book […]
ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့ ဘိုမရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုလှနေတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
fb/ Naw Phaw Eh Htar & Li John Photography နော်ဖောအယ်ထားကတော့ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေကြောင့် facebook ကတဆင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများလာတဲ့ဆယ်လီတစ်ဦးပါ။ ဖေ့ဘွတ်ကတဆင့် အောင်မြင်လာတဲ့ ဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နော်ဖောကတော့ ယခုဆိုရင် ပရိသတ်လက်ခံအားပေးလာတဲ့ မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါပြီ။ အခုဆိုရင် နော်ဖောကတော့ ပရိသတ်အတွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ fb/ Naw Phaw Eh Htar & Li John Photography နော်ဖောကတော့ သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမရဲ့ဖေ့ဘွတ်လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာ ပရိသတ်အတွက် အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဖောကတော့ Chatime ရဲ့ Grand opening ကိုတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှထားပါတယ်။ fb/ Naw Phaw Eh Htar & Li John Photography […]
Netflix series အဖြစ် ရိုက်ကူးပေးဖို့ တောင်းဆိုခံနေရတဲ့ God Of War ဗီဒီယိုဂိမ်း
Sony PlayStations Gord Of War ကိုတော့ လူငယ်တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို PS2 ဂိမ်းဆိုင်မှာ အားတဲ့အချိန်တိုင်း ပြေးပြေးဆော့နေရတဲ့ ဂိမ်တွေထဲမှာ God Of War က ထိပ်ဆုံးပါပဲ။ ကြိုက်လွန်းလို့ အစကပြန်ဆော့တိုင်းလဲ ရေချိုးဆောင် (ဒချိဒချိအခန်း) အခန်းထဲက တော်ရုံနဲ့ မထွက်ချင်ကြတာ တော်တော်များများပါပဲ( ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ပါဝင်ပါတယ် ? )။ Sony Play Stations သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ God Of War ကို Netflix series အဖြစ် ရိုက်ကူးပေးဖို့ ဂိမ်းရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တွေနဲ့ God Of War ဂိမ်းဒါရိုက်တာ Cory Barlog ကိုယ်တိုင်က Netflix […]
(၆၂)ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ လူတွေ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ ထူးခြားချက်(၁၀)ချက်
Instagram/RecordingsAcademy ဂီတနယ်ပယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ဆုတွေထဲက အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ဆုလို့ ပြောလို့ရတဲ့ (၆၂) ကြိမ်ြမောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့(၂၆.၁.၂၀၀၂)က ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲမှာ ဂရမ်မီသမိုင်းမှာ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းရေးထိုးသွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ရှိပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူအများစု သတိမပြုမိခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ … ကွယ်လွန်သွားတဲ့ Kobe Bryantရဲ့ ဂျာစီကို ပွဲတစ်လျှောက်လုံး ပုံဖော်ထားခဲ့ YouTube/CBS ဂရမ်မီဆုပေးပွဲကြီးကျင်းပနေတုန်း နာရီပိုင်းလောက်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘတ်စကတ်ဘော အကျော်အမော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kobe Bryant စီးလာတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျပြီး နေရာမှာပဲ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပျက်ကျမှုထဲမှာ Kobe Bryant အပြင်၊ သူ့ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ သမီးဖြစ်သူ Gianna […]
အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မော်ဒယ် M ဆိုင်းလု
Image facebook by M Seng Lu မော်ဒယ် M ဆိုင်းလုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အနုပညာလောကမှာ သူမရဲ့ အရမ်းကို မိုက်လွန်းတဲ့ bodystructure ၊ ဟန်ပန်တွေကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Image facebook by M Seng Lu M ဆိုင်းလု ကို March 24, 1993 ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မော်ဒယ်လောကကို 2011 ခုနှစ်မှာ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေများစွာကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသူပါ။ Image facebook by M Seng Lu ခုဆိုရင်တော့ […]
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်